Xayawaan - Wikipedia
Xayawaan (Af Ingiriis : animal; Af-Carabi: حيوان‎) waa noole ka mid ah noocyada noolaha. erayga "xayawaan" wuxuu ka yimid Af Carbeedka, dhiggiisa Af soomaaligana waa "bahal". Bahalladu wey kala duwanyihiin. Qaarkood waxay ku noolyihiin dhulka dushiisa, qaarna waxay ku noolyihiin badaha iyo wabiyada. Jaad ka mid ah bahallada waxay awoodaan in ay ku noolaadaan bad iyo berriba, sida raxa (halkani bad waxaan ula jeednaa biyaha).
1.1 Qeybaha Boqortooyooyinka
1.3 Sidoo kale eeg
Xayawaanka Yehowah baa abuuray. Aadan baa magacyo xayawaanka u bixiyay.
Sidoo kale eegEdit
↑ Huber M, Knottnerus JA, Green, L., van der Horst H, Jadad AR, Kromhout D, Smid H. BMJ 2011; 343 (d4163) Archived Oktoobar 19, 2020 // Wayback Machine
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Xayawaan&oldid=230686"
Last edited on 13 Febraayo 2022, at 08:13
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 13 Febraayo 2022, marka ee eheed 08:13.